Dhibcaha MCA waxay muujinayaan baahida loo qabo taageero joogto ah | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Sidii la filayay, natiijooyinkii ka soo baxay Qiimayntii Dhameystiranayd ee Minnesota waxay muujinayaan hoos u dhac ku yimid tirada ardayda Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Stillwater oo la kulmay ama dhaaftay heerarka heerka fasalka intii lagu jiray sannad-dugsiyeedka 2020-2021. Waa isbeddel lagu arkay guud ahaan gobolka iyo umadda dhexdeeda oo ah masiibada COVID-19.
“In kasta oo ay quseyso, natiijadu ma ahan wax la yaab leh, maadaama aan ognahay in carqaladeynta badan ee barashada ee uu sababay COVID ay saameyn ku yeelan doonto ardaydeena,” ayay tiri Dr. Jennifer Cherry, kaaliyaha kormeeraha degmada. “Ahmiyadeena sannadkan waxay noqon doontaa inaan dib ula xiriirno ardaydeena markay dib-ugu-soo noqdaan shaqsi ahaan si ay u dardar-geliyaan waxbarashada ayna u siiyaan taageerada caafimaadka bulshada-dareenka iyo maskaxda ee ay u baahan yihiin.”
Imtixaanaadka MCA waxay cabbiraan horumarka ardayda ee xagga heerarka waxbarashada gobolka ee sayniska, xisaabta iyo akhriska. Wax badan ka baro qiimaynta . Imtixaanaadka lama qaadin 2020 bilowga masiibada, laakiin mar labaad ayaa la bixiyay gugii 2021. Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay uga digtay degmooyinka dugsiyada inay isbarbar dhigaan natiijooyinka 2021 sanadihii hore ama xogta isbeddelka, iyagoo ku tilmaamay inay sabab u yihiin caqabadaha badan ee COVID.
Intii lagu jiray sanad dugsiyeedka 2020-2021, arday badan ayaa u kala gudbay qaababka barashada - min hybrid ilaa masaafo ilaa qof ahaan - sida xaaladaha COVID ee gobolka oo dhan ay daruuri u tahay. Qaar kale waxay ku sii jireen barashada fogaanta sannad dugsiyeedka oo dhan. Gobolku wuxuu u baahday dhammaan ardaydii ka qaybgashay imtixaankii gobolka oo dhan inay imtixaan qof ahaaneed galaan, taas oo saamaysay heerarka ka qaybgalka. Dugsiyada Stillwater, qiyaastii 25% ardayda u qalanta inay imtixaan galaan (ku dhawaad 1,000 arday) ayaan qaadan imtixaannada 2021 -ka.
“Ardaydeena iyo shaqaalaheena waxay saarnaayeen rookalesteraster labadii sano ee la soo dhaafay iskuulka,” ayuu yiri Dr. Cherry. “Waxaan luminay waqti waxbarid qiimo leh bilowgii masiibada, iyo sanadkii la soo dhaafay oo dhan waxay u adkaysteen isbeddelo badan oo qaab waxbarasho ah, oo ku habboon teknolojiyad cusub, waxayna ku jireen culays jidheed, bulsho iyo shucuur aad u weyn. Waxaan leenahay wax badan oo aan ku hagaajin karno waxaana naga go'an inaan gacan ka geysanno sidii ardaydeenna loogu soo celin lahaa waddada sanadaha soo socda. ”
In kasta oo ay hoos u dhacday, ardayda Stillwater waxay sii wadeen inay ka sarreeyaan celceliska gobolka 2021:
Akhrinta, 56.24% dhammaan ardayda Stillwater ayaa aad u yaqaana marka la barbar dhigo 52.5% gobolka.
Xisaabta, 53.38% dhammaan ardayda Stillwater ayaa aad u yaqaana halka celceliska gobolku ahaa 44.22%.
Sayniska, 49.84% dhammaan ardayda Stillwater ayaa aad u yaqaana marka la barbar dhigo 43.14% ardayda gobolka oo dhan.
Maamulayaasha degmada iyo dugsigu waxay la shaqayn doonaan macallimiinta toddobaadyada soo socda si ay u sahamiyaan xogta si ay si fiican u fahmaan fikradaha ardaydu fahmaan iyo meelaha ay u baahan karaan si kor loogu qaado waxbarashadooda. Fursado tababar oo kala duwan iyo horumarin xirfadeed ayaa la siin doonaa macallimiinta si ay uga taageeraan dhinacyada akhris-qoraalka, xisaabta iyo barashada dareenka shucuureed.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan natiijooyinka guusha ardayga ayaa la wadaagi doonaa inta lagu jiro warbixinta guddiga dugsiga kulanka 9 -ka Sebtembar. Kulanka ayaa si toos ah looga baahin doonaa Youtube -ka laga bilaabo 6 -da fiidnimo